10 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ गिरावट भ्याकेसनहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ गिरावट भ्याकेसनहरू
मध्यकालीन किल्लाहरू, दाखबारी, मनोरम परिदृश्य, केवल केहि चीजहरू छन् जुन गिरावट बिदाको लागि युरोप उत्तम गर्दछ. प्रत्येक युरोपेली शहरको यसको आकर्षण छ, तर गन्तव्यहरु हाम्रो मा 10 युरोपको सूचीमा सबैभन्दा राम्रो गिरावट छुट्टिहरू सबैभन्दा केहि हुन् सुन्दर ठाउँहरू.
युरोप विशेष गरी गिरावटमा आश्चर्यजनक छ जब रूखहरू र पहाडहरू चम्किलो सुन्तलामा चित्रित हुन्छन्, आगोको रातो, र पहेलो. अक्टोबरको अन्तमा, सडकमा कम भीडहरू छन्, र यसको मतलव तपाईले आफैंमा सुन्दर गिरावट अवलोकनहरू पाउनुहुनेछ. गिरावट यात्राको लागि उत्तम समय हो किनकि होटल र यात्रा मूल्यहरू उल्लेखनीय रूपमा खस्छन्.
यो ट्रेन द्वारा हाम्रो सूचीमा सबै आश्चर्यजनक ठाउँहरूमा यात्रा गर्न सजिलो र आरामदायक छ. फ्रान्सको लोइर उपत्यकाबाट लक्जमबर्ग, तपाईंले यात्रा गर्नु भएको यूरोपमा सब भन्दा यादगार गिरावट बिदाको योजनाको लागि ट्रेन यात्रा उत्तम छ.
ट्रेन यात्रा एक धेरै सुविधाजनक र पर्यावरण मैत्री यात्रा गर्न को लागी हो. thलेख द्वारा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको छ छ एक ट्रेन सेव, सस्तो ट्रेन टिकटहरू विश्व मा वेबसाइट.
1. Umbria मा गिरावट पतन, इटाली
जबकि धेरै युरोप मा गिरावट छुट्टी को लागी टस्कनी रुचाउँछन्, इटलीको उम्ब्रिया क्षेत्र धेरै बढी प्रभावशाली छ र युरोप र इटालीमा सब भन्दा राम्रो गिरावट यात्रा गन्तव्यहरू मध्ये एक हो.
ट्रेन द्वारा सजीलो पहुँचयोग्य रोम बाट, Umbria कम भीड र इटाली मा सस्ता आवास मूल्य प्रदान गर्दछ. अक्टोबरमा ढिलो सेप्टेम्बरमा, तपाईं Gbbio जस्तै शहरहरूमा सेतो ट्रफफल र नयाँ वाइन उत्सवको मजा लिन सक्नुहुन्छ. पनि, तपाईं वार्षिक यूरोक्लोकट महोत्सव को लागी Perugia जान सक्छ. त्यसैले, उंब्रिया सब भन्दा महान परिदृश्यमा आफूलाई लाड पार्ने कुरा हो, युरोपमा तपाईंको गिरावट बिदाको समयमा उत्तम खाना र मद्यको आनन्द लिँदै. छोटो वा लामो यात्राको बखत, तपाइँ रोमान्टिक पोस्टकार्ड जस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ, युरोपमा सब भन्दा राम्रो गिरावट बिदाको ठाउँहरूमा.
ओर्भिएटो टिकटमा फ्लोरेन्स
ओर्भिएटो टिकट सिएना
ओरेभोटो टिकट टिकटको लागि
Perugia मा Orvieto टिकटहरु
2. Cinque Terre, इटाली
अनलाइन फोटोहरूले न्याय गर्दैन जादुई Cinque Terre इटाली मा क्षेत्र. पहाडहरूको शीर्षमा रंगीन घरहरू, दाखबारीले घेरिएको, स्थानीय रेस्टुरेन्ट, र पैदल यात्रा ट्रेल्स, सबै यस क्षेत्र लाई युरोप मा एक आश्चर्यजनक गिरावट यात्रा गन्तव्य बनाउन. Cinque Terre वास्तवमा समावेश गर्दछ 8 सानो गाउँ र रेल रेलले ती सबैलाई एक अर्कामा जोड्दछ. यसले गाउँहरूमा प्रत्येक एक सजिलैसँग भेट्न विशेष गरी सजिलो बनाउँदछ 2-3 दिनहरू यदि तपाईं समयमै छोटो हुनुहुन्छ भने. गिरावटमा युरोपमा सब भन्दा उत्तम स्थानहरू मध्ये एकमा ट्रेन हपिंग भन्दा के राम्रो हुन सक्छ?
सिनके टेरे सामान्यतया समुद्र तट र मूल पानीको लागि तातो गर्मीको गन्तव्य हो. तथापि, गिरावटमा जानु उत्तम हो, किनभने साँघुरो सडकहरू पर्यटकहरूबाट तुलनात्मक रूपमा खाली छन्. त्यसैले, धेरै जसो रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन्, तपाईंले अझै पनि समुद्रलाई नदेखी खुला बार भेट्टाउन सक्नुहुनेछ र शान्तिको दृश्यहरूको प्रशंसा गर्नुभयो.
तपाईं खर्च गर्न सक्नुहुन्छ4दिन गाउँहरू अन्वेषण र ला Spezia शहर मा एक लामो सप्ताहन्तमा खर्च, Cinque Terre मा ट्रेन यात्रा को लागी तपाइँको सुरूवात बिन्दु. ला Spezia बाट, तपाईं आफ्नो मनपर्ने को कुनै पनि गाउँमा यात्रा ट्रेन.
La Spezia को Manarola टिकटहरु
Riomaggiore बाट Manarola टिकटहरु
सर्जानादेखि मानारोला टिकटहरू
Levanto बाट Manarola टिकटहरु
3. ताल Lugano, स्विट्जरल्याण्ड
स्पार्कलिंग फ़िरोज़ा पानी, टेराकोटा रंगी घरहरू, स्विजरल्याण्डको ताल Lugano यूरोप मा हाम्रो शीर्ष गिरावट ट्राभल गन्तव्य हो. स्विजरल्याण्डको युरोपमा अविस्मरणीय गिरावट बिदाको लागि धेरै आश्चर्यजनक ठाउँहरू छन् र ल्यूग्नो स्विजरल्याण्डको मुकुट रत्नहरू मध्ये एक हो.
अक्टुबरको मध्यमा तापक्रम अझै न्यानो हुन्छ, त्यसोभए तपाईं तालको वरिपरि दाखबारीबाट दाखमद्यको गिलास लिएर बस्न सक्नुहुन्छ वा परम्परागत शरद festivalतुमा पोलेन्टा स्टुको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ।. यदि तपाइँ युरोपमा तपाइँको गिरावट बिदामा थोरै उत्साह र साहसिक थप्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं मोन्टे ब्रेक बढाउन सक्नुहुन्छ. शिखरबाट हेराइहरू लुगानो खाडीका केही रोमाञ्चक दृश्यहरू छन्.
Lugano को पुरानो शहर रंगीन शहरहरु छ, 10 वर्ग, र विलासी किनमेल सडक Via Nessa बाट. तल रेखा, ताल Lugano प्रकृति मायालु र सुन्दर जीवन-मायालु यात्रु दुबैका लागि उत्तम छ. Lugano ताल यूरोप मा एक आराम छोटो सप्ताहन्त वा विस्तारित छुट्टी को लागी भयानक छ.
तपाईं सजिलैसँग एक घण्टा भन्दा कममा मिलन सेन्ट्रलबाट रेलमा लुगानो तालमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ. ट्रेनहरू हरेक घण्टा मिलन ट्रेन स्टेशनबाट छुट्छन्.
ज्यूरिख टिकटहरूमा अन्तरक्रिया
लुसेर्नबाट ज्युरिख टिकटहरू
लुगानो ज्युरिख टिकटहरू
जिनेभाबाट ज्युरिख टिकटहरू
4. Hannover मा छुट्टी गिरावट, जर्मनी
हन्नोभर जर्मनीको सब भन्दा कम शहर हो, तर युरोपमा गिरावट बिदाका लागि उत्तम गन्तव्यहरू मध्ये एक. यो महान शहर एक विशाल पार्क को घर छ, न्यु योर्कको सेन्ट्रल पार्क को आकार भन्दा दोब्बर. प्राचीन ओक रूखहरू र सुन्दर ताल पार्क मैदान मा छन्, strolls र शरद inतु मा आलसी दिउँसो को लागी आदर्श.
मार्कप्लाट्ज ओल्ड टाउन र क्लक टावर गोथिक आर्किटेक्चर पत्ता लगाउन एक उत्कृष्ट सुरूवात बिन्दु हो. तपाईं प्रभावशाली न्यू टाउन हल गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ, तालको वरिपरि भव्य दरबार जस्तो संरचना. हरियो जमिन र रूखहरूले भव्य दरबारलाई घेर्दछन् र भव्य वातावरण र सुनौला रंगहरूमा हेर्नुहोस्.
ह्यान्ओभर जर्मनीको एउटा रत्न हो र गिरावटमा त्यो राम्रो हुन सक्दैन. यदि तपाइँ युरोपमा गिरावट बिदाको योजना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसोभए ह्यानओभर आदर्श यात्रा गन्तव्य हो. धेरै पर्यटकहरूले यसको जादू पत्ता लगाएका छैनन्, त्यसैले, तपाईं शहर मा आफ्नो जीवन को समय हो पहिलो हुन सक्छ.
ब्रेमेन एम्स्टर्डम टिकटहरु
ह्यान्ओभर एम्स्टर्डम टिकटहरू
एम्स्टर्डम टिकट Bielefeld
ह्याम्बर्ग एम्स्टर्डम टिकटहरु
5. बभेरियन आल्प्स र कालो वन, जर्मनी
कालो वन र बभेरियन आल्प्स युरोप मा गिरावट परिवार छुट्टी को लागी एक लोकप्रिय विकल्प हो. जर्मनीको यो आश्चर्यजनक क्षेत्र जर्मनीको सबैभन्दा उत्तम गिरावट यात्रा स्थलहरू मध्ये एक हो.
जब तपाईं एउटा रमणीय गाउँमा ट्रेनबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ, तपाईंले तुरून्तै महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईं ब्रदर्स ग्रिमको कथामा सिधा जानु भएको छ. आश्चर्यजनक तालहरू, ट्राइबर्ग झरना, हरियो उपत्यका, र दाखबारीहरु यूरोप मा एक अविस्मरणीय गिरावट छुट्टी ग्यारेन्टी.
पातहरू सुनौलो रंगमा रंगहरू परिवर्तन गर्दछ, पृष्ठभूमिमा हिउँले माथिबाट पहाडहरू छन्. आल्प्समा ठूलो बृद्धि गरेपछि काठको केबिनमा आराम गर्नु भनेको अविस्मरणीय अनुभव हो. तपाई कुनै एउटालाई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ 25 क्षेत्र मा महल र Neuschwanstein महल एक उल्लेखनीय महल छ यूरोप मा तपाईंको गिरावट छुट्टी मा अन्वेषण गर्न को लागी।.
अफेनबर्ग फ्रीबर्ग टिकटहरू
स्टुटगार्टबाट फ्रीबर्ग टिकटहरू
फ्रिबर्ग टिकट लाईपजीग
न्युरेम्बरबर्ग फ्रीबर्ग टिकटहरु
6. Ahornboden मा छुट्टी गिरावट, अस्ट्रिया
Rissbachtal घाटी र कारवेन्डेल अल्पाइन पार्क, शरद vacationतुमा छुट्टीको लागि अष्ट्रियामा एक राजसी यात्रा गन्तव्य हो. Ahornboden को Alpine इलाका छ 2,000 बर्ष पुरानो साइकमोर-म्यापल रूखहरू तिनीहरूको शरद goldतुको सुन र सुन्तलाको पोशाकमा आश्चर्यजनक देखिन्छन्. प्रकृति र हिमालहरूले युरोपमा यादगार गिरावट यात्रा गन्तव्यको लागि बिल्कुल शानदार दृश्यहरू सिर्जना गर्दछ.
टायरोलको यो क्षेत्र माउन्टेन बाइकर र अनुभवी चालकहरूको लागि सिफारिश गरिएको हो. को राष्ट्रिय निकुञ्ज युरोपमा अविस्मरणीय छुट्टीको लागि चुनढुंगा पर्वतहरूको बीचमा धेरै उत्कृष्ट हाइकहरू र ट्रेल्स छन्.
साल्जबर्ग मात्र छ3Ahornboden बाट घण्टा रेल बाट, स्थानान्तरण सहित. साथै, त्यहाँ अफ्र सीजनको दौरान Grosser Ahornboden मा होटेल सौदा र आवास विकल्पहरू छन्.
7. लोइर उपत्यकामा छुट्टी गिरावट, फ्रान्स
टीऊ लोइर उपत्यका फ्रान्सको वाइन क्षेत्रमा अवस्थित छ. यसको मतलब यो हो 185,000 अक्टोबरको अन्तमा सुनमा अ acres्गुर अv्गुरहरू जलाउँछन्. त्यसकारण यो युरोप मा यात्रा गर्न को लागी सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ को एक र एक आकर्षक गिरावट छुट्टी यात्रा गन्तव्य हो.
धेरैले लिन्छन् जबकि पेरिस बाट दिन यात्रा, यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं यसको लामो जादू र सौन्दर्यको कदर गर्नको लागि लोइर उपत्यकामा लामो सप्ताहन्तमा बस्नुहोस्. यो बाटो, तपाईं उपत्यकामा एक वा दुई आश्चर्यजनक महलहरूको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै Chateau de Chambord. कोही भन्छन् कि यो उल्लेखनीय महल डे डिन्सी आफैले डिजाईन गरेको थियो.
को चेम्बर्ड महल छ2घण्टा पेरिसको दक्षिण र तपाईं पेरिस अस्टरलिट्जबाट ब्लोइस-चम्बर्डसम्म यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ. एक घण्टा भित्र, तपाईं सुन्दर दरबार भटकिने छ.
पेरिसदेखि स्ट्रासबर्ग टिकटहरू
लक्जमबर्ग देखि स्ट्रासबर्ग टिकटहरू
न्यान्सीदेखि स्ट्रासबर्ग टिकटहरू
ब्यासललाई स्ट्रासबर्ग टिकटहरू
8. बरद, फ्रान्स
गिरावटमा फ्रान्स भन्दा बढि आकर्षक र रोमान्टिक केहि छैन. बोर्डो एक अन्तर्निहित फ्रान्सेली शहर हो र सेन्ट-Emilion दाखबारीहरु र अर्काचोन को तटहरु को घर, यी2ठाउँहरू केवल केहि कारणहरू हुन् जसले तपाईंलाई बोर्डोमा नौवेले एक्वाटेनको साथ मायामा राख्दछन्।. महलों, वाइन टुरहरू, स्पा उपचार, र खाना पकाउने पाठ, तपाईंको पतन बिदाको लागि बोर्डोलाई उत्कृष्ट यात्रा गन्तव्य बनाउनुहोस्.
अक्टोबरको अन्तमा प्राय: पर्यटकहरू घर फर्कन्छन्, त्यसैले यात्रा र आवास मूल्यहरू बोर्डो मा ड्रप. यस समयमा दाखबारीले अpes्गुरको फसल सुरू गर्दछ र तपाई त्यस क्षेत्रको धेरै जसो एउटामा बस्न सक्नुहुन्छ र पिन्च गर्न सक्नुहुन्छ. यो पक्कै एक जोड्दछ अद्वितीय अनुभव तपाईंको छुट्टी फोटो एल्बममा.
यस क्षेत्र फ्रान्स मा कुनै पनि बाट रेल बाट पुग्न महान छ, र त्यहाँ प्रत्यक्ष छन् उच्च गतिको रेल पेरिस-अस्टरलिट्ज र मोन्टपर्णासे रेल स्टेशनहरूबाट.
ला रोशेल नान्तेस टिकटहरु
टुलूज गर्न ला रोशेल टिकटहरू
बोर्डो मा ला रोशेल टिकटहरु
पेरिस गर्न ला रोशेल टिकटहरू
9. पेरिस मा छुट्टी गिरावट, फ्रान्स
युरोप सूचीमा हाम्रो उत्तम गिरावट छुट्टी पेरिस बिना पूरा हुँदैन. पेरिस सधैं एक राम्रो विचार हो, तर यो गिरावट मा विशेष गरी राम्रो छ. लक्समबर्ग गार्डन, सानो फ्रान्सेली क्याफेहरू, र प्रत्यक्ष सडक संगीतले यूरोपमा अविस्मरणीय छुट्टीको लागि उत्तम सेटि setting सिर्जना गर्दछ.
सिप तातो चकलेट वा मोन्टमार्ट अ gra्गुर फसलको चाड हेर्नुहोस्, पेरिससँग ती तेजस्वी चित्रहरु स्न्याप गर्न को लागी धेरै राम्रा ठाउँहरु छन्. सब भन्दा फोटोजेनिक स्पटहरू जार्डिन्स डु लक्जमबर्ग हुन्, Parc MONCEAU, र Tuileries बगैचा. अक्टुबर को अन्त देखि, त्यहाँ संगीत को शहर भर मा विभिन्न स्थानहरु मा वार्षिक शरद festivalतु उत्सव छ, नृत्य, र कला प्रदर्शन. त्यसैले, चाहे वर्षा होस् वा घाम, पेरिस गर्न धेरै महान कुरा प्रदान गर्दछ.
पेरिस कम भीड छ र यात्रा मूल्यहरू धेरै सस्तो अफ-सीजन हो, त्यसैले ट्रेन यात्रा र आवास पेरिस एक युरोपीयन छुट्टी को लागी एक ठूलो गिरावट यात्रा गन्तव्य बनाउँछ.
10. एम्स्टर्डम, नेदरल्यान्ड्स
वसन्तको समयमा, ट्यूलिप्स एम्स्टर्डमको बगैंचा र पार्कहरू सज्जित गर्दछ, तर गिरावट मा, सुन्तला, पहेंलो र रातो पातहरू नहरहरू र सडकहरूमा रंग दिन्छ. एम्स्टर्डम एक निरपेक्ष सौन्दर्य हो र त्यसैले यो यूरोप मा सबै भन्दा राम्रो गिरावट छुट्टी स्थानहरु मध्ये एक हो. तपाईं एम्स्टर्डम मार्फत मात्र हिंड्न सक्नुहुन्छ3दिन, तर तपाईं लामो समय सम्म रहन र सुन्दर दृश्यहरूको कदर गर्न हरेक कुनामा रोक्न चाहनुहुन्छ.
एम्स्टर्डम यूरोप मा छुट्टी को लागी एक अद्भुत शहर हो, संग 50 शहर मा संग्रहालयहरु, डुङ्गा सवारी नहरहरूमा, नेदरल्याण्ड्स मा यस आश्चर्यजनक गिरावट यात्रा गन्तव्य मा गर्न को लागी धेरै शानदार चीजहरू छन्. थप रूपमा, त्यहाँ शानदार पार्कहरू छन् जहाँ तपाईं पिकनिक पाउन सक्नुहुन्छ वा साइकल वरिपरि यदि मौसम राम्रो छ.
एम्स्टर्डम यूरोप मा एक उत्तम शहर हो, छिमेकी देशहरूमा कहीँबाट पनि ट्रेन द्वारा पहुँचयोग्य, र शहर भित्र नेभिगेट गर्न सजिलो.
बोनस: लक्जमबर्ग मा छुट्टी गिरावट
बेल्जियम, फ्रान्स, र जर्मनी सानो लक्जमबर्ग देश वरिपरि, युरोप मा उत्तम गिरावट यात्रा गन्तव्य. लक्जमबर्ग शहर यसको पुरानो शहर को लागी प्रख्यात छ, पहाडमा अवस्थित र मध्ययुगीन किल्लाले घेरिएको. यसको तेजस्वी आर्किटेक्चर र पुरानो-संसार आकर्षणले यसको शीर्षक कमाएको छ यूनेस्को विश्व विरासत साइट. लक्जमबर्गको लागि तपाईको छुट्टीमा ग्रान्ड डुकल प्यालेस र एडोल्फ ब्रिज अवलोकन गर्न मिल्छ.
बगैंचा र धेरै दृश्यहरूले सम्पूर्ण शहर र यसको वरपरको लुभावना दृश्यहरू प्रदान गर्दछ. गिरावट मा दृश्य विशेष गरी शरद colorsतु रंगहरु मा सुन्दर छन्. त्यसैले, लक्जमबर्ग युरोपको सबैभन्दा सानो शहर हो, यो गर्वसाथ पेरिस जस्ता ठूला विश्वव्यापी शहरहरूको छेउमा छ. शरद Europeतुमा यूरोपमा तपाइँको छुट्टीको लागि लक्जमबर्ग छनौट गर्न यो निश्चित छ.
उन्नत रेल सेवाहरूका लागि धन्यबाद, तपाईं कुनै पनि समय मा यूरोप मा कहीं पनि यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ. सानो विश्वव्यापी शहरबाट सानो र उल्लेखनीय शहर, हाम्रो मा प्रत्येक शहर 10 युरोप मा गिरावट छुट्टी को लागी सबै भन्दा राम्रो शहरहरु, यसको अद्वितीय आकर्षण र जादू छ.
एन्ट्वर्प लक्जमबर्ग टिकटहरू
ब्रसेल्सबाट लक्जमबर्ग टिकटहरू
मेट्ज देखि लक्जमबर्ग टिकटहरू
पेरिसदेखि लक्जमबर्ग टिकटहरू
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हाम्रो सूचीमा कुनै पनि सुन्दर गन्तव्यहरूको लागि सस्तो ट्रेन टिकटहरू फेला पार्न मद्दत गर्न हामी खुशी हुनेछौं.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ गिरावट भ्याकेसनहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-fall-vacations-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
bestfalleuropedestferences Bestfallvacationeurope फलाइनलाइन FallvacationEurope traintraveleurope